DF oo sheegtay in Diiwaangelin iyo tayeyn ciidamada ku socotaa ay dib u dhigtay bixintii Mushaharka | Goojacade
Home War DF oo sheegtay in Diiwaangelin iyo tayeyn ciidamada ku socotaa ay dib...
DF oo sheegtay in Diiwaangelin iyo tayeyn ciidamada ku socotaa ay dib u dhigtay bixintii Mushaharka
Wasaaradaha Gaashaandhigga iyo Taliska Xoogga oo ka hadlay mushahar la’aanta haysata ciidamada dowladda qaarkood ayaa sheegay inay ku howlan yihiin diiwaan-gelinta Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed si loo tayeeyo howlaha ciidanka loona hubiyo xuquuqda ciidanka.
Waxay sidoo kale sheegeen in askari walba oo diiwaan-gelintiisa la xaqiijiyay uu mushaarkiisa u qaato si toos ah looguna shubo koontadiisa bangiga.
Warka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yiri “Sidoo kale waxaa loo billaabay in 30 doolar oo kamid ah qoondada raashinka askarta si toos ah loogu shubo koontada uu askarigu bangigiisa ku leeyahay marka la xaqiijiyo diiwaan-gelintiisa”
Wasaaradda waxay sheegtay in ciddii la diiwaangeliyay ee aan weli helin xaquuqdooda billaha ah ay ku socoto xaqiijin rasmi ah.
“Sidoo kale waxaa wali socda diiwaan-gelinta ciidanka, waxaana ciidamada la diiwaan-geliyay lagu amray inuu ku sugnaadaadaan goobtooda shaqada” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Wasaaradaha Gaashaandhigga iyo Taliska Xoogga dalka Soomaaliya.
“Inta ay socoto diiwaan-gelintu waxaa laga codsan doonaa ciidamada qaarkood in ay yimaadaan goobo ku dhow goobtooda shaqo, sida kuwa Dhanaane oo lagu diiwaan-gelin doono Jazeera, kadibna ay dib ugu laaban doonaan goobtooda shaqo.”
Wasaaradda Gaashaandhiga iyo Taliska Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ciidanka ku wargeliyay inta ay diiwaan-gelinta socoto askari walba uu heli doono xuquuqdiisa oo buuxda marka ay soo dhammaato diiwaan-gelintu.
Previous articleWar-muriyeed laga soo saaray kulankii Farmaajo iyo Cumar Geelle
Next articleDaawo Al-Jazeera oo Baahisay Barnaamijka “Dagaalkii Dekeddaha” Imaaraadka iyo Soomaaliya (Berbera iyo Boosaaso)